खोपपछि एन्टिबडी जाँच गराउनु राम्रो - Chandragiri News
Home स्वास्थ्य खोपपछि एन्टिबडी जाँच गराउनु राम्रो
२०७८, १५ भाद्र मंगलवार ०६:५७
काठमाडौँ । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाएको २०औँ दिनमा सङ्क्रमित हुनुभयो लोकन्थलीकी सजिना डङ्गोल । खोप लगाउँदा उहाँलाई कुनै पनि प्रभाव (साइड इफेक्ट) देखिएको थिएन । त्यसैले सङ्क्रमित भएको कुरा उहाँलाई भ्रम हो कि जस्तो पनि लाग्यो ।
फाइजर खोप लगाएपछि न्यूजील्यान्डमा ‘एक महिलाको मृत्यु’
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार खोप लगाएपछि आफूमा केही लक्षण वा साइड इफेक्ट नदेखिएमा खोपले काम नै गर्दैन होला भनेर भ्रम पाल्नु हुँदैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, “कसैमा लक्षण देखिने, नदेखिने हुन्छ तर खोपले काम गर्छ । औषधिले काम गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुरा व्यक्तिपिच्छे फरक हुन्छ ।” कोभिडको खोप पाएको दुई हप्तापछि एन्टिबडी परीक्षण गराउँदा राम्रो हुने डा. पुनको सुझाव छ । यो खबर आजको गोरखपात्र दैनिकमा छापिएको छ ।
Previous articleबलबहादुर र अस्मिताको ‘मन कि मन्जरी’ सार्वजनिक
Next articleभिँ द्य जात्रा